म नेपाल फर्कनै पर्छ आमा | MYAGDINEPAL
Home / राष्ट्रिय समाचार / म नेपाल फर्कनै पर्छ आमा
अघिल्लो पटक मैले नेतालाई चिठी लेख्दा दुई जनाले निक्कै तिखा बचन बाण हानेको म कसरी बिर्सन सक्छु र आमा ? नपत्याए हेर न उनीहरुले कस्तोसम्म लेख्न भ्याएका छन् । तिमीलाई त थाहा छ नि, के म मेरो पत्रको कमेन्ट बक्समा लेखिएको जस्तै थिए त ? अनुप शर्मा र विवेक दाहालले मलाई कुन आशयले मेरो नेतालाई लेखेको चिठीमा कडा प्रतिकृया जनाएका थिए, त्यो मलाई थाहा छैन । तर मलाई ती तिता बचनले सधै पोलिरहयो । मैले मेरो मन सम्हाल्नै सकिन । हरेक दिन सम्झिरहें ती प्रतिकृयाहरु । परदेशबाट मेरो नेतालाई चिट्ठी लेख्दा म नेपाल आमाले सराप्ने कपूतको सूचिमा परें अरे ।
आ-आफ्नो भोगाई अनि बुझाई हो मैले यो पटक पनि विदेशिने तर्खरमा रहेका हजारौं नेपालीलाई रोक्ने आँट गर्न सकिन अनि विदेशमा भौतारिरहेका अनेक दुःख कष्ट र हण्डर खाएका कसैलाई पनि स्वदेश फर्कौ भन्न सकिन । त्यसैले आमा, म एक्लै फर्कदैछु, छिट्टै फर्कदैछु ।
उही अाज्ञाकारी छाेरा बाेमलाल गिरी, हाल युराेप